Gabadhii sifadaan laga helo marna lama furo lamana xumeeyo - Hablaha Media Network
Gabadhii sifadaan laga helo marna lama furo lamana xumeeyo
HMN:- 4- taan qodob hadii aad leedahay waxaad tahay boqorada ay rag badan u hanqal taagan iney helaan.
Quruxan:- Ragga waxey doonaan dumarka quruxda badan xaqiiqdii, ma ahan inaad u ekaato sida hablaha modelistayaasha quruxdooda oo kale,laakin ahaaw mid quruxdeeda dabiiciga ah difaacata,hadana waa inaad taqaanaa quruxdaada masaaxada ay la’eg tahay iyo sidaad uga faa’iideysan karto,adigoo aanan sharaftaada ku xadgudbeynin ama jirkaaga soo banaan dhigeynin.
Ku xisaabtan marwalbo quruxdaada waa hubkaaga,laakin ka fogow quruxda ka badbadiska ah,dhibaatada ay kuu geysaneyso ayaa ka badan faa’iidada ay kugu soo kordhineyso.
Maskax:-Dad badan waxey qabaan in caqligu uu qurux yahay, nimankuna aad ayey u soo jiidataa naagta caqliga badan,tan maskaxdeedu shaqeysa. hadii aad tahay mid ka warheysa waxa ka socda hareeraheeda,taqaanana si ay u maareysa xaalada ka soo dersa. Raggu aad ayey u jecel yihiin haweeneyda u tartanta iney wax la qeybsato, miiska soo saarta aragtida cajiibka leh.
isku qanacsan:- Nimanku wey ka helaan haweenka qaab ahaan ku haboon,laakin waxey kaloo jecel yihiin haweeneyda shaqsi ahaan isku filan ee ku kalsoon nafteeda,islamarkaana qaadan karta go’aano wax ku ool ah ee ku saabsan nolosheeda,hadana aan jecleyn iney dad ku tiirsanaato.hadii aad intaas oo karti leedahay xagooda dahab ayaad ka tahay.
Hab nololeedka:-Isku dheelitirka hab nololeedku waa muhiim. Rag badan aad ayey uga helaan iney la kulmaan qof isku dheelitiri kara shaqadiisa,qoyskiisa,asaxaabta iyo qofka uu xiriirka jaceyl la wadaagayo,waxaana u sawiran haweenka madaxa banaan ee taqaano waxa ay dooneyso iyo yoolka ay hiigsaneyso.